Archive du 20190619
Kimaizimaizin’ny fitondrana Tonga ny fiara “4x4” an-jatony tsy fanta-pihaviana…
Niala tao Toamasina nihazo ny renivohitra ny alin’ny alahady 16 jona sy ny alatsinainy mangiran-dratsy teo ny fiara tsy mataho-dalana na 4x4 marika Nissan Navara miisa 117 ary misy fiara hafa manodidina ny 20 eo ho eo ihany koa, raha ny loharanom-baovao iray.
Nosy Eparsa Mitaky ny azy koa ny Kaomorianina sy Maorisianina
Teo ny fitakiana nataon’ny antoko politika frantsay RN, tarihin’ny filohany, Marine Le Pen, fa amin’izao fotoana koa dia fantatra, araka ny loharanom-baovao iray,
Depiote “tsy miankiana” Hiova fo sa mbola ho zakan’ny malety ?
Kandidà 46 tsy miankina na mahaleotena izany hoe tsy natolotra fikambanana na antoko politika no manana seza eo anivon`ny Antenimieram-pirenena araka ny vokatra vonjimaika avy amin`ny CENI.
Distrika Ambilobe Miaina anaty sakoroka
Saika raikitra ny rombo teo amin’ny mpomba ny kandida tany amin’ny distrika Ambilobe faritra DIANA. Efa mirehareha fatratra mantsy ilay kandida IRD Assimo Bruno fa izy no tsy maintsy mandresy.
Vovonan’ny foko 22 eto Madagasikara Hatao amin’ny 22 septambra any Toamasina
Tsy manana fetim-pirenena izany ny Malagasy hatramin’ny andro ny 26 jona sy ny 14 oktobra fahiny dia nanamarihana seho nitranga fotsiny.
Fanjakana miovaova hevitra « Azo amidy sy apoaka indray ny tsipoapoaka »
Nihemotra tamin’ny didy efa navoakany ny eo anivon’ny Prefektioran’Antananarivo tarihin’ny Jeneraly Ravelonarivo Angelo Christian
Bararata.com Tranokalam-pifandraisana malagasy voalohany
Nahita masoandro ny 15 jona lasa teo ny tambajotran-tserasera Malagasy voalohany, nantsoina hoe “Bararata” mitovy lenta amin’ny Facebook: azo handefasana sary, horonantsary, “statut”…
Fidinan’ny vidin-tsolika Anio ny fanapahan-kevitra goavana…
Mafy ary tsy vitan’ny fampanantenana sy ny kabary tsara rindra na ny serasera mipoapoaka ny fitantanana ny firenena.
Fiovaovan’ny toetr’andro Afaka manalefaka i Madagasikara
Nivory omaly tetsy amin’ny Carlton Anosy ireo komity mikambana ao amin’ny CIME izay ivondronan’ny sekretera jeneralin’ireo minisitera hiarovana ny tontolo iainana.
Motostore show” Hetsika vaovao ho an’ireo mpankafy moto
Sambany no hotanterahina eto amintsika ilay hetsika lehibe “Motostore show” andiany voalohany, karakarain’ny orinasa Motostore sy ny Festiv.
Hand-ball IHF Trophy Afrique 2019 Tafaverina an-tanindrazana ny delegasiona Malagasy
Tafaverina an-tanindrazana tamin’ny alatsinainy 17 jona teo ny delegasion’ny taranja Hand-ball “cadette” sy “junior” vehivavy Malagasy avy niatrika ny fifaninanana IHF Trophy 2019 “zone 6 sy 7” natambatra aty Afrika natao tany Lusaka Zambie manomboka tamin’ny 11 ka hatramin’ny 16 jona 2019 lasa teo.
Sekoly ambony UPRIM Mpianatra 500 latsaka no niatrika “soutenance” omaly
Mpianatra 500 latsaka no niatrika “soutenance” omaly teo anivon’ny sekoly ambony UPRIM. Mpianatra nanaraka ny fampianarana hampitain-davitra avokoa izy ireo raha ny fantatra ary havoaka ny 13 Jolay ho avy izao.
Fiara tsy laitram-bala Tsy ny tafika no nampiasa azy
Nitondra fanamarihana ny tompon’andraikitra iray avy amin’ny Tafika Malagasy omaly mahakasika ireo fiara tsy laitram-bala miisa roa izay nomen’ny filoham-pirenena ho an’ny mpitandro filaminana.
Ambatolampy Tsimahafotsy Lehilahy iray maty voahosin’ny kamio
Nandriaka ny rà teny Ambodifasina Ambatolampy Tsimahafotsy omaly. Lehilahy iray no maty tsy tra-drano teny an-toerana, ka voahitsaky ny kamio mpitaona tany izy io, raha fanamarihan’ny besinimaro.
Isan`ny mponina maneran-tany Hiakatra 9,7 lavitrisa amin`ny 2050
Araka ny tatitra navoakan`ny Firenena Mikambana (ONU) ny alatsinainy lasa teo, hahatratra 9,7 lavitrisa ny isan`ny mponina maneran-tany amin`ny taona 2050 raha toa ka 7,7 lavitrisa ankehitriny kanefa tokony ho avo roa heny.
Afera fanolanana sy vono olona 2 lahy maty notaritarihina eran’ny tanàna
Lehilahy mpivahiny miisa 2 matin’ny fitsaram-bahoaka tamin’ny endriny hafa mihitsy tany amin’ny kaominina Tanambao Dahoda any Sambava omaly talata 18 jona tokony ho tamin’ny 10 ora maraina.
Minisiteran’ny mponina Olona sahirana 1100 no nizarana fotsimbary
Nanomboka omaly talata 18 jona ny hetsika fizarana fanampiana ho an’ireo sahirana ara-pivelomana tanterahin’ny minisiteran’ny mponina, tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny fetim-pirenena 26 jona.
Ady tany ao Mananara Avaratra Mivoaka tamin’ny fahanginany ny vahoaka
Tsy hangina intsony manoloana ny ady tany ao Mananara Avaratra ireo mponina, raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana.
Politika fampandrosoana Tokony hitodika tanteraka amin’ny famoronana asa
Ny tsy fisiana asa sy ny famoronana asa no olana eto amin’ny firenena, hoy ny sekretera jeneralin’ny FIraisan’ny SEndikan’ny Mpiasan’i Madagasikara (FISEMA),
Sinto-mahery Analamahitsy Mpangarom-paosy roalahy nidoboka am-ponja
Tratra ambodiomby tany amin’ireo roalahy mpanendaka ny finday halatra iray. Nifanojo ka voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny kaomisaria boriborintany faha-8 Analamahitsy ny 13 jona lasa teo izy ireo. T
Lozam-pifamoivoizana Iavoloha Telo naratra mafy, fiara efatra nifandona
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina teo Iavoloha, omaly talata 19 jona tolakandro. Fiara kely marika « peugeot 206 » no nirifatra nihazo ny lalam-pirenena faha-7, teo akaikin’ny fiolahana ahitana ny tobin-dasantsy tsy lavitra ny Lapam-panjakana.
Hetsiky ny fankalazana ny fahaleovantenam-pirenena Hisy didimpoitra faobe ny sabotsy izao eo Namontana
Araka ny fampitam-baovao ofisialin’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena, tafiditra ao anatin’ny hetsika fankalazana ny fahaleovantenam-pirenena ny fanatanterahana didimpoitra faobe.